gorodona vita amin'ny vinina malalaka
kitiho ny gorodona vinyl hidin-trano
zavatra: 5mm matevina avo lenta matevina vita amin'ny visy amin'ny gorodona
1. Anti-slip, Anti-agila, avo lenta anti-abrasion sy anti-bakteria 2. Fandraisana feo sy fihenan'ny tabataba 3. Elastika avo lenta, fiarovana avo lenta 4. Mora apetraka 5. Vidy fikojakojana ambany, tsy mila savoka 6. Lava kokoa mandritra ny androm-piainan'ny Vinyl Flooring (EIR SPC Flooring) Loko tsy tapaka loko na santionanao tahaka ny hatevin'ny Birao 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6mm na ny hatevin'ny Wear 0,3mm, 0.5mm, 0.7mm ho toy ny ambonin'ny mahazatra Famolavolana Veneer (Hard / Softwood) voa, marbra, vato, karipetra. Sur ...
zavatra： 4mm / 4.2mm / 5.0mmVinyl Flooring click system Vinyl plank gorodona LVT
Size: 7 ”x 48” / 9 ”x 48”
Entana: 12mm Waterproof Laminated Flooring
Entana: Laminate gorodona 12mm
Vokatra: Tondra-drano vita amin'ny Vinyl vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny vinyl
Ny gorodona vita amin'ny plastika vato (SPC), ny ampahany tsy manam-paharoa dia ny sosona fototra henjana izay vita amin'ny vovoka sokay. Milamina kokoa noho ny taila vinina nentim-paharazana izany. Ity fitambaran-javatra plastika vato ity dia mahatohitra ny fanitarana sy ny fihenan-tsasatra am-polony taona maro ary manao tsara amin'ny toerana iray io hamandoana io mety ho olana. Izy io dia 100% tsy tantera-drano izay tsy hikorontana na hikorontana.
Mitovy amin'ny gorodona LVT, ny gorodona vita amin'ny vinky henjana koa dia mety hitovy amin'ny hazo na vato misy sosona fanaovana pirinty ary ny sosona anaovan'ny embossed dia ahafahanao mahazo gorodona milamina sy tsara tarehy.
Ny gorodona vita amin'ny vinyl matevina dia miasa tsara ho an'ny sehatra ara-barotra sy trano. Ny sosona mitafy UV mifono azy dia mahatohitra ny rangotra sy tasy eo ambanin'ny akanjo isan'andro. Miaraka amin'ny rafitra tsindry tokana sy ny famolavolana sisiny, ny planks vinyl SPC dia mifandray tsy misy fotony ary tsy misy lakaoly.
Entana: 5.0mm spc gorodona tsy azo tanterahina tile azo tsindrio hidin-trano
4.0mm5.0mm tsindrio vinyl
Famaritana: Luxury PVC Vinyl Flooring Click System
Hateviny: 4.0mm ~ 5.0mm
Size：6 '' X 36 '' / 6''X48 '' / 7''X48 '' / 8 '' X48 '' / 9''X48 '' / Customization
Famaritana: Lakaoly midina LVT Flooring PVC Luxury Vinyl Plank
Hateviny: 2.0mm ~ 3.0mm
Fametrahana: Lakaoly midina